Gbanwee uche anyị site na ọdachi gaa olile-anya
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 12, 2020 Septemba 12, 2020
Ọdachi abụghị ihe ọhụụ nye ndị nke Chineke Ọtụtụ omume nke Akwụkwọ Nsọ na-egosi ma ọchịchịrị nke ụwa a ma ịdị mma nke Chineke dịka ọ na-eweta olile-anya na ịgwọ ọrịa n’ọnọdụ ndị dị egwu.
Ihe Nehemaịa mere mgbe ihe siiri ya ike bụ nke ịhụnanya na nke dị irè. Dịka anyị na-elele ụzọ o si mee ihe banyere ọdachi mba na ihe mgbu onwe onye, ​​anyị nwere ike ịmụta ma too na nzaghachi anyị n'oge nsogbu.
N’ọnwa a, United States na-echeta ihe ndị mere na Septemba 11, 2001. N’ịbụ onye a kpachara anya ma chee na anyị ekpebisibeghị ike ịlụ ọgụ, anyị tufuru ndụ ọtụtụ puku ndị nkịtị n’otu ụbọchị maka mwakpo sitere n’aka ndị iro dị anya. Bọchị a kọwapụtara akụkọ ihe mere eme anyị ugbu a, a kụziri 11/7 n'ụlọ akwụkwọ dị ka mgbanwe na "Agha na ụjọ," dịka a kụziri December 1941, XNUMX (mwakpo ahụ na Pearl Harbor) dị ka mgbanwe na agha ụwa nke abụọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị America ka maara ihe na iru uju mgbe anyị chere echiche banyere 11/XNUMX (anyị nwere ike icheta kpọmkwem ebe anyị nọ na ihe anyị na-eme na echiche mbụ batara anyị n'uche), ndị ọzọ gburugburu ụwa na-eche ọdachi nke mba ha ihu. Ọdachi ndị na-emere onwe ha gburu ọtụtụ puku mmadụ n'otu ụbọchị, mwakpo ndị alakụba na ụka, ọtụtụ puku ndị gbara ọsọ ndụ na-enweghị mba ịnabata ha na ọbụlagodi mgbukpọ nke gọọmentị nyere iwu.
Mgbe ụfọdụ ọdachi ndị kachasị emetụta anyị abụghị nke na-ekwuru akụkọ gburugburu ụwa. O nwere ike ịbụ igbu onwe onye obodo, ọrịa a na-atụghị anya ya, ma ọ bụ ọbụbụ mfu nwayọ nwayọ dịka imechi ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ịhapụ ọtụtụ enweghị ọrụ.
Ọchịchịrị na-eti ụwa anyị a, anyị na-echekwa ihe a ga-eme iji weta ìhè na olileanya.
Ihe Nehemaya mere mgbe ọdachi ahụ mere
Otu ụbọchị n’Alaeze Peshia, otu onye na-eje ozi n’obí eze na-eche ka ọ nụrụ isi obodo nke obodo ya. Nwanne ya agaala leta ya ka ọ hụ ka ihe si aga na ozi ọma adịghị mma. “Ndị fọdụrụ n'ógbè ahụ ndị lanarịrị ije biri n'ala ọzọ nọ na nnukwu nsogbu na ihere. Mgbidi Jerusalem a kwatuwo, a na-ebibikwa ọnụ ụzọ ámá ya nile n’ọkụ ”(Nehemaịa 1: 3).
Nehemaya ji obi ya niile wepụta onwe ya. Ọ kwara ákwá, kwaa ákwá ma buo ọnụ ụbọchị ụfọdụ (1: 4). Mkpa ọ pụtara na Jerusalem nọ na nsogbu na ihe ihere, nke ekpughere na ịkwa emo site na ndị ọzọ gafere ya ịnakwere.
N’otu aka, nke a nwere ike ịdị ka obere mmekpa ahụ. Ọnọdụ ihe abụghị ihe ọhụrụ: afọ 130 tupu mgbe ahụ a chụpụla Jerusalem, gbaa ya ọkụ ma mee ka ndị bi na ya jee biri n'ala ọzọ. Ihe dị ka afọ 50 mgbe ihe omume ndị a gasịrị, mgbalị iji wughachi obodo ahụ malitere, malite na ụlọ nsọ ahụ. Nehemaịa chọpụtakwara na mgbidi Jeruselem ka tọgbọrọ n'efu ruo afọ 90 ọzọ.
N'aka nke ọzọ, azịza Nehemaịa bụ eziokwu nye ahụmahụ ụmụ mmadụ. Mgbe a na-emeso otu agbụrụ ihe n'ụzọ na-ebibi ihe ma na-akpata obi mgbawa, ncheta na ihe mgbu nke ihe ndị a na-abụ akụkụ nke DNA mmetụta uche mba. Ha anaghị apụ apụ ma ghara ịgwọ ha ngwa ngwa. Okwu a na - ekwu, "oge na - agwọ ọnyá niile," mana oge abụghị onye na - agwọ ọrịa kachasị. Chineke nke elu-igwe bu onye ogwugwo ahu, mgbe ufodu O n’eji olu ike n’udi di ike iweghachite, obughi nani na aja an’anu aru kamakwa na obodo.
N'ihi ya, anyị hụrụ Nehemaya ihu n'ala, na-ebe ákwá n'esepụghị aka, na-akpọku Chineke ya ka o mee mgbanwe n'ọnọdụ a na-adịghị anakwere. N'ekpere nke mbụ Nehemaya dere, o toro Chineke, chetara ya ọgbụgba ndụ ya, kwupụta mmehie ya na nke ndị ya, ma kpee ekpere maka ihu ọma ndị isi (ọ bụ ekpere toro ogologo). Rịba ama ihe na-adịghị ebe ahụ: mkparị megide ndị bibiri Jerusalem, mkpesa banyere ndị tụbara bọọlụ na wughachi obodo ahụ, ma ọ bụ gosipụta omume mmadụ. Ikpere ya nye Chineke dị umeala n’obi.
Ma ọ bụ na ọ na-adịghị lee anya na uzo nke Jerusalem, na-efufe isi ya na-aga n'ihu na ndụ ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ maara ọnọdụ obodo ahụ, ọnọdụ ọjọọ a metụtara Nehemaịa n'ụzọ pụrụ iche. Gịnị gaara eme ma ọ bụrụ na onye odibo a na-arụsi ọrụ ike, kwuru, sị, "Ọ dị mwute na ọ dịghị onye na-echebara obodo Chineke echiche. Ọ bụrụ na anọghị m n'ọnọdụ dị otú ahụ jọgburu onwe ya n'ala ọzọ a, aga m eme ihe banyere ya ”?
Nehemaịa gosipụtara ezi iru uju
Na 21st narị afọ America, anyị enweghị ọnọdụ maka iru uju miri emi. Olili ozu ahụ na-ewepụta otu ehihie, ezigbo ụlọ ọrụ nwere ike ịhapụ ụbọchị atọ nke ịhapụ mmadụ, ma anyị chere na ike na ntozu oke yiri ka ha na-aga n'ihu ngwa ngwa o kwere mee.
Ọ bụ ezie na mmetụta ime mmụọ Nehemaịa buuru ọnụ, iru újú, na ịkwa ákwá, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na ịdọ aka ná ntị na nhọrọ kwadoro ha. O wereghị iwe kpuchie ihe mgbu ya. Enye ikesịnke idem ke n̄kpọ unọ idem inemesịt. O nyeghịdị onwe ya nri. Ihe mgbu nke ọdachi abụrụwo mmetụta nke eziokwu na ọmịiko Chineke.
Oge ụfọdụ anyị na-atụ ụjọ na mgbu ga-ebibi anyị. Ma a na-eme mgbu iji weta mgbanwe. Ihe mgbu anụ ahụ na-akpali anyị ilekọta ahụ anyị anya. Mgbu mmetụta uche nwere ike inyere anyị aka ilekọta mmekọrịta anyị ma ọ bụ mkpa ime mmụọ. Mgbu mba nwere ike inyere anyị aka iwughachi ịdị n'otu na ịnụ ọkụ n'obi. Ikekwe nkwenye Nehemaịa “ime ihe,” n’agbanyeghi ọtụtụ ihe mgbochi, sitere n’oge nọrọ na-eru uju.
Atụmatụ maka ịgwọ ọrịa
Mgbe ụbọchị iru uju gasịrị, ọ bụ ezie na ọ laghachiri ọrụ, ọ gara n'ihu na-ebu ọnụ ma na-ekpe ekpere. Nihi na nkpuru-obi-ya adiwo uku n'iru Chineke, nke ahu weputara ya ìzù. Maka na o nwere atụmatụ, mgbe eze jụrụ ya ihe wutere ya, ọ maara nke ọma ihe ọ ga-ekwu. Ikekwe ọ dị ka anyị onwe anyị na-ekwughachi mkparịta ụka ụfọdụ n'isi anyị ugboro ugboro tupu ha emee!
Ẹma ẹkụt mfọn oro Abasi ekenyenede ọnọ Nehemiah toto ke ini enye akanamde inua ke ubet ebekpo edidem. Ọ natara onyinye izizi na nchekwa wee nweta oge ọ na-enweghị ọrụ. Ihe mgbu nke mere ka ọ ebe ákwá mekwara ka ọ mee ihe.
Nehemaịa mere ememe ndị ha nyeere karịa iweda ndị ha merụrụ ahụ ala
Nehemaịa chetara ọrụ nke ndị ahụ site na ịdepụta onye mere ihe iji wughachi mgbidi (isi nke 3). Ememe ezigbo ọrụ ndị mmadụ na-arụ iji wughachi, isi ihe anyị na-agbanwe na ọdachi gaa n'olileanya.
Dịka ọmụmaatụ, na 11/XNUMX, ndị na-aza ajụjụ mbụ bụ ndị tinyere onwe ha n'ihe ize ndụ (ọtụtụ site na ndụ ha) gosipụtara achọghị ọdịmma onwe onye na obi ike nke anyị dịka mba chọrọ ịsọpụrụ. Ememe ndụ ndị nwoke na ndị nwanyị a na-arụpụta ihe karịa na-agba ume ịkpọasị maka ndị nwoke jidere ụgbọ elu n'ụbọchị ahụ. Akụkọ ahụ na-aghọ obere banyere mbibi na ihe mgbu; kama anyi nwere ike ihu izoputa, ogwugwo na iwughari nke juputara ebe nile.
O doro anya na e nwere ọrụ a ga-arụ iji chebe onwe anyị pụọ na mwakpo n'ọdịnihu. Nehemaịa nụrụ banyere ụfọdụ ndị iro na-akpa nkata ịwakpo obodo ahụ mgbe ndị ọrụ na-a payingaghị ntị (isi 4). N'ihi ya, ha kwụsịrị ọrụ ha ruo nwa oge ma nọrọ na nche ruo mgbe ihe ize ndụ gafere. Ha ji ngwá agha n'aka ha maliteghachi ọrụ. I nwere ike iche na nke a ga-ebelata ha n’ezie, mana ikekwe iyi-egwu nke mwakpo nke ndị iro kpaliri ha ịrụzu mgbidi ahụ nchebe.
Ọzọkwa, anyị hụrụ ihe Nehemaịa na-adịghị eme. Ihe o kwuru banyere iyi egwu nke onye iro ahụ abụghị ebubo nke nkọwa nke ụjọ nke ndị a. Ọ naghị amanye ndị mmadụ ilu na ha. Ọ na-ekwu ihe n'ụzọ dị mfe ma dị irè, dị ka, "Ka onye ọ bụla na onye na-ejere ya ozi rahụ na Jerusalem, ka ha wee na-eche anyị nche n'abalị ma na-arụ ọrụ n'ehihie" (4:22). N'aka ozo, "anyi nile g'eme okpukpu abuo nwa oge." Nehemaịa ahapụghịkwa (4:23).
Ma ọ bụ nkwupụta okwu nke ndị ndu anyị ma ọ bụ mkparịta ụka anyị na-enwe kwa ụbọchị anyị hụrụ onwe anyị na ya, anyị ga-eme nke ọma karịa site n’itigharị uche anyị pụọ n’ịkpasu ndị mejọrọ anyị iwe. Hatredkpọasị ịkpọasị na ụjọ na-enyere gị aka ịkwụsị olileanya na ume iji gaa n'ihu. Utu ke oro, ke adan̄aemi idade eti ibuot inịm ukpeme, nnyịn imekeme ndineme nneme ye odudu eke ntụk nnyịn ke ndifiak mbọp.
Sram a edi kan no, wɔboaboaa wɔn ho ano wɔ Yerusalem asɔrefie hɔ
N'agbanyeghị mmegide niile ha chere ihu na ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị ha nyeere aka, Nehemaịa duziri ndị Israel n'iwughachi mgbidi ahụ n'ime nanị ụbọchị 52. E bibiri ihe ahụ ruo afọ 140. O doro anya na oge agaghị agwọ obodo ahụ. A gwọrọ ndị Izrel ọgwụgwọ mgbe ha ji obi ike mee ihe, mee ka obodo ha kawanye mma, ma rụọ ọrụ n'ịdị n'otu.
Mgbe e wusịrị mgbidi ahụ, Nehemaịa gwara ndị ndú okpukpe ka ha gụpụta Iwu ahụ n'olu dara ụda nye ndị nile gbakọtara. Ha nwere nnukwu ememe ka ha mere ọhụụ ntinye ha na Chineke (8: 1-12). Aha obodo ha malitere ịmalite ọzọ: Chineke kpọrọ ha ka ha sọpụrụ ya n'ụzọ ha ma gọzie mba ndị gbara ha gburugburu.
Mgbe anyị chere ọdachi na ihe mgbu ihu, anyị nwere ike ịzaghachi n'ụzọ yiri nke ahụ. Ọ bụ eziokwu na anyị enweghị ike ime ihe siri ike dịka Nehemaịa mere iji zaghachi ihe ọjọọ niile mere. Ọ bụghị mmadụ niile kwesịrị ịbụ Nehemaya. Fọdụ ndị mmadụ kwesịrị ịbụ ndị nwere hama na ntu. Mana lee ụfọdụ ụkpụrụ anyị nwere ike ịnara site na Nehemaịa iji nweta ọgwụgwọ ka anyị na-azaghachi ọdachi:
Nye onwe gi oge na ohere iji akwa akwa
Nwee ihe mgbu gị na-ekpegara Chineke maka enyemaka na ọgwụgwọ
Na-atụ anya mgbe ụfọdụ ka Chukwu meghe ụzọ ime ihe
Gbado anya na ime ememme ndị ọma na-eme karịa njọ nke ndị iro anyị
Kpee ekpere ka nwughari ahụ na-eduga na ọgwụgwọ na mmekọrịta anyị na Chineke
Nke gara aga Post Gara aga post:Ura na ekpere nye aha di Meri
Next Post → Post ozo:Kadịnal Vatican na-elele anya maka coronavirus